मनोरञ्जन – Page2– Karnalikhabar
किन बोल्दैनन् काजोल र करण जोहर ?
टोबायोग्राफी ‘एन अनसुटेबल ब्बोइ’ मा करणले काजोलसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेका थिए । हालै भएको एक कार्यक्रममा काजोललाई लिएर करण भड्किएको समेत बताइयो । मिडिया रिपोर्टका अनुसार टिभी सो ‘दिल है हिन्दुस्तानी’ मा करण
नायिका करिश्मा मानन्धर कक्षा ९ की विद्यार्थी !
स्कुलमा कक्षा ९ मा पढ्‍न थालेकी छन्। ग्‍यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट कक्षा आठ पास गरेकी नायिका मानन्धर मैतिदेवीस्थित त्रिवेणी पब्लिक स्कुलमा भर्ना भएकी हुन। सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्,' म पुन: नियमित
आमिर खानका लागि प्रियंकाको यस्तो त्याग
बलिउड अभिनेता आमीर खान र प्रियंका चोपडा पहिलो पटक एस्ट्रोनट राकेश शर्माको बायोपिकमा सँगै काम गर्ने भएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार प्रियंकाले सञ्जय लिला भन्सालीको फिल्ममा समय अभाव भएको भन्दै काम गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।
पहिलो चलचित्र ‘ड्रिम्स’ रिलिजसँगै नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको मनमा डर र उत्साह दुबै थियो । उनी अभिनित दोश्रो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ले बक्स अफिसमा गर्ने कमाइले उनको
सलमान खान मुडि स्वभाब भएका ब्यक्ति हुन् । सलमान खान कुनबेला के गर्छन् सायद उनी आफैँलाई पनि थाहा हुदैँन होला । एक अवार्ड शो को दौरान उनको यस्तै मुडी स्वभाब देख्न पाईएको छ । उक्त कार्यक्रमम उनका एक फ्यान उनको अगाडी आएर ‘नफुट्ने
टाईगर श्राफ यतिबेला आफ्नो फिल्म ‘बाघी २’ को तयारीमा ब्यस्त छन् । तर उनदे हालै ट्वीटरमा जुन भिडियो सेयर गरेका छन् जसको कारण यतिबेला उनको चर्चा चल्न सुरु भएको छ । बाहिरको हल्ला सुन्ने हो भने टाईगर फिल्ममा डबल रोलमा देखिने छन् ।
शाहरुख खान उनको १७ बर्षिय छोरी सुहानाको नयाँ फोटो बाहिर आएको छ । यो फोटोमा बुवाछोरीलाई एकदमै कुल लुक्समा देखिएको छ । फोटो कलर र ब्ल्याक एण्ड ह्वाईट दुवै स्टार्यलमा छ । शाहरुख खानले यो फोटो ट्वीटरमा शेयर गरेका छन् । शाहरुख
साउथ इंडियन फिल्मका भिलने सुदीपले केहिदिन अघि आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । सुदीपलाई हिरोको भन्दा भिलनेको भुमिकामा धेरै अफरहरु आउने गर्छ । उनी साउथ इंडियन भिलेनहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने भिलनेको रुपमा अगाडी आएका
राजवल्लभले गरे प्रतिमासँग इन्गेजमेन्ट
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कुनै समय चर्चित रहेका नायक राजवल्लभ कोइरालाले अमेरिकामा नै इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । अमेरिकामा नै बस्दै आएकी प्रतिमा बिमलीसँग उनले इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् । राजवल्लभ र प्रतिमाका इन्गेजमेन्टका
प्रकाशित मिति : आइतवार, भदौ १८, २०७४
पहिरनको कारण प्राय जसाे मिडियामा छाउने अभिनेत्री भित्र पर्छिन् प्रियंका कार्की । कुनै पनि कार्यक्रम पुग्दा फरक शैलीको गेटअपमा प्रियंका पुगेकी हुन्छिन् । प्रियंकाले हालै आफ्नो अफिसिय ल इन्ट्राग्राम एकाउन्ट मार्फत एउटा फोटो